Ejipta: Fanapahan-kevitry ny governemanta hanakana ny Skype mampiasa ny Modem USB · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2010 7:41 GMT
Toa miezaka ny hifehy ny habaky n y aterineto ny governemanta Ejiptiana raha ny tsaoa ary ireo mponin'ny aterineto dia miroso hatrany mankany mankany. Na dia hoe, tsy ananana porofo aza ny andrana maro nataon'i Ejipta hifehezana ny vohikala sy ireo tolotra anivon'ny aterineto, dia maro ny làlana arahan'ny governemanta hanaraha-maso hatrany izay mitranga amin'ny aterineto, mifanindan-dàlana amin'ny fanaovana tsindry aloka ny mpitoraka blaogy sy ny mponin'ny aterineto.
Roa andro lasa izay, ireo mponina ao Ejipta mampiasa ny Modem USB mba hifandraisana amin'ny aterineto dia tsy afaka nampiasa ny Skype, rindrambaiko maimaimpoana izay ahafahanao manao antso amin'ny alalan'ny aterineto (VoIP). Tany ampiandohana dia noheverin'izy ireo fa olana ny fidirana amin'ny aterineto no mety fipetrany, ary rehefa nanomboka niantso ny kaompania misahana ny serasera finday ry zareo dia nilazana fa tsy ahazoana alàlana ampiasaina amin'ny Modem USB intsony ny Skype.
Androany, niantso ny sampan,a mpikarakara ny mpanjifa ao amin'ny kaompania Vodafone aho, ary dia nilazana aho fa nisy baiko navoaka roa andro lasa izay avy tamin'ny Sampandraharaham-pirenena Mpandrindra ny Fifandraisan-davitra ho fanakanana ny Skype tsy ho ampiasaina intsony amin'ny Modem USB, niainga avy amin'ny fitarainana nataon'ireo orinasa telo mpanao tolotra serasera finday ao Ejipta, milaza fa very vola noho ny olona manao antso amin'ny aterineto izay mora vidy kokoa.
Azo raisina ho niainga avy amin'ny olana ara-toekarena ny fanapahan-kevitra, nefa amiko dia nanana fotoana malalaka tsara hisakanana ny fampiasana ny vohikala sy ny tolotra ireo orinasa mpanao tolotra serasera finday ao Ejipta talohan'ny hamoahany ny doka mikasika ny Modem USB-ndry zareo . Ankoatra izay, tsy mba nampilaza tamin'ny fomba ofisialy ny mpanjifany ireo orinasa na nanazava ny anton'ny fanapahan-kevitra.
Tena tohina tamin'ity fanapahan-kevitra kidaladala ity mihitsy aho ary manantena fa tsy ho vanimpotoana iray indray ity hanakanan'ny governemanta, na ireo vohikala na ireo tolotra, noho ny “antony ara-bola”, amin'ny alalan'ny Sampandraharaham-pirenena Mpandrindra ny Fifandraisan-davitra!